I-Realme 2: amanqaku kunye nexabiso leselfowuni entsha | I-Androidsis
I-Realme 2 isemthethweni: amanqaku kunye nexabiso lodidi olutsha lwaphakathi
I-Realme, inkampani eyenziwe phantsi kwesifuba sika-Oppo, isizisela ifowuni entsha, ephumelela i-Realme 1 esungulwe e-India ebutsheni balo nyaka njengexabiso eliphakathi eliphakathi.
Isiphelo esitsha sivula iQualcomm SoC hayi iMediatekInesikrini esingaphezulu kweesentimitha ezi-6 kwaye iza kwiinguqulelo ezimbini ezahlukeneyo, apho imemori ye-RAM kunye nendawo yokugcina yangaphakathi yahlukile. Sinikela kuwe!
I-smartphone entsha ixhobisa i-6.2-intshi ye-diagonal FullView screen. Iza nesisombululo se-HD + se-1.520 x 720 pixels phantsi kwe-2.5D yeglasi egobileyo kunye neCorning Gorilla Glass. Yintoni egqithisile, isixhobo sixhotyiswe nge-450 GHz octa-core Qualcomm Snapdragon 1.8 processor, okuthetha ukubuyela umva njengoko iRealme 1 isebenzisa iMediatek P60, ngokucacileyo enamandla ngakumbi. Kwangelo xesha, inikwe ibhetri enkulu ye-4.230 mAh umthamo.
Ngakolunye uhlangothi, iRealme 2 iza ngeendlela ezimbini: enye ene-3 GB ye-RAM ene-32 GB yokugcina ngaphakathi kunye ne-4 GB ye-RAM ene-64 GB yokugcina yangaphakathi. Zombini zine-slot ye-microSD yekhadi yokwandiswa kwememori yeROM.
Ngokubhekisele kwicandelo lokufota, Iselfowni sisemthethweni esine-sensor yangemva yesisombululo se-13 kunye ne-2MP kunye nekhamera ye-8 megapixel yangaphambili ye-selfies kunye neefowuni zevidiyo.
0.1 Fumanisa: U-Oppo VP urhoxile ukuba yi-CEO yeRealme
Fumanisa: U-Oppo VP urhoxile ukuba yi-CEO yeRealme
Ngokungafaniyo ne-predecessor yayo, i-smartphone iza ne-sensor yeminwe kwipaneli esemva, nangona isenenkxaso yesoftware esekwe ebusweni yokuvula ubuso. Ukongeza koku, iqhuba i-Android 8.1 Oreo phantsi kwesixhobo sayo sombala weColorOS 5.1, ngelixa iinketho zonxibelelwano kwisixhobo zibandakanya inkxaso ye-Dual 4G VoLTE, iWi-Fi 802.11 b / g / n, iBluetooth 4.2, iGPS + GLONASS kunye ne-USB OTG.
I-Realme 2 iyafumaneka eIndiya kukhetho lwemibala emithathu: iDayimane emnyama, iDayimane ebomvu kunye neBlue Blue. Umbala omnyama nobomvu uyaqhubeka ukuthengiswa ukusuka nge-4 kaSeptemba kunye neBlue Umbala ukusukela ngo-Okthobha.
Imodeli ye-3GB ye-RAM inexabiso nge-Rs 8.990, eguqulela kwii-euro ezingama-109 ngexabiso lokutshintshiselana, ngelixa imodeli ye-RAM ye-4GB ixabisa i-Rs 10.990, eyi-134 euros.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Realme 2 isemthethweni: amanqaku kunye nexabiso lodidi olutsha lwaphakathi